ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းလေး ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းဖို့ ငွေကျပ်သိန်း (၂၀၀) လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေနဲ့ လင်းလင်း - Cele Gabar
ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းလေး ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းဖို့ ငွေကျပ်သိန်း (၂၀၀) လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေနဲ့ လင်းလင်း
ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်း ကို တည်ထောင်သူ အဆိုတော် ချစ်သုဝေနဲ့ လင်းလင်းတို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ စိတ်တူကိုယ်တူ အလှူအတန်းတွေ အဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာ ပရိသတ်တွေသိပြီဖြစ်မှာပါ ။ လက်ရှိမှာလည်း ဧရာဝတီတိုင်း သဲကုန်းအုပ်စု အုန်းချောင်းကျေးရွာမှာ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ပုသိမ်ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဆရာDr. သန်းမင်းထွဋ် အား ငွေကျပ်သိန်း၂၀၀ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ။
ကုန်းလမ်းရေလမ်းနဲ့ သွားရတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း သဲကုန်းအုပ်စု ကျေးရွာ ၇ရွာအတွက် သားဖွားခန်းအပါ ကျေးလက်ဆေးခန်းလေး မှာအလွန်လိုအပ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပြီး တာဝန်ကျဆရာမလေးများရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံမှု ၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း ၊ သားဖွားခြင်း ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှူများပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲများပြုလုပ်နိုင်ခြင်း အစရှိတာတွေကို ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အလှူရှင်များအားလုံးစိတ်နှလုံးဝမ်းမြောက် ပီတိဖြစ်ဖို့ အတွက် သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
ခေတ်သစ် ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ COVID 19ကာလအတွင်းကျန်ရှိသောအလူငွေလက်ကျန်တွေကို ဧရာဝတီတိုင်း သဲကုန်းအုပ်စု အုန်းချောင်းကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ရန် ပုသိမ်ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဆရာDr. သန်းမင်းထွဋ် အားအခုလို လှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်း ဒီထက်မက လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာ ဆက်လက်လှူဒါန်းနိုင်ပါစေလို့ Cele Gabar က ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Previous post ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်က အမိုက်စားရိုက်ချက်တွေနဲ့ လန်းလွန်းနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတင်လိုက်တဲ့ မထက်
Next post အရမ်းလှတဲ့ ရှုခင်းတွေကိုနောက်ခံထားကာ ခရီးသွားခဲ့စဉ်က အမှတ်တရရိုက်ထားတဲ့ ညိမ်းသော်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး